11 गोर्खा सहिद परिवारलाई मोदीको शपथ कार्यक्रममा निम्तो : ममता व्यानर्जीको उड्यो होस् : सहिद परिवारलाई शपथ कार्यक्रममा बोलाउनु हाम्रो आन्दोलनलाई स्वीकृति दिनु हो- विमल - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचार11 गोर्खा सहिद परिवारलाई मोदीको शपथ कार्यक्रममा निम्तो : ममता व्यानर्जीको उड्यो होस् : सहिद परिवारलाई शपथ कार्यक्रममा बोलाउनु हाम्रो आन्दोलनलाई स्वीकृति दिनु हो- विमल
11 गोर्खा सहिद परिवारलाई मोदीको शपथ कार्यक्रममा निम्तो : ममता व्यानर्जीको उड्यो होस् : सहिद परिवारलाई शपथ कार्यक्रममा बोलाउनु हाम्रो आन्दोलनलाई स्वीकृति दिनु हो- विमल
May 30, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
‘ममता व्यानर्जीले पहाडमा मच्याएको हिंसाको प्रमाण शपथ ग्रहण कार्यक्रममा गएका ती 11 परिवारका सदस्यका अनुहार हो,’ विमल गुरुङले भने, ‘हिजैमात्र पनि हाम्रा प्रवक्ता, कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूलाई यसकारण मुद्दा लगाइएको छ किन भने उनीहरू बङ्गालबाट मुक्ति चाहान्छन्। छुट्टै राज्य चाहन्छन।’
सिलगढी, 30 मई
आज7बजी बेलुकी नरेन्द्र मोदीले शपथ ग्रहण गर्नेछन्। यसपल्टको शपथ ग्रहण एउटा खास कारणले पनि चर्चामा छ, त्यो हो बङ्गालमा भएका हिंसामा मारिएका भाजपा कार्यकर्ताका परिवारलाई दिइएको निम्तो।
यी परिवारका सदस्यहरूको सबै खर्च भाजपाले नै बेहोर्दैछ। अचम्म के छ भने हिजोसम्म बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी मोदीको शपथ कार्यक्रममा जाने भएकी थिइन्। तर जस्तो सोही कार्यक्रममा बङ्गालको हिंसामा मरेका कार्यकर्ताहरूको परिवारका सदस्यलाई पनि निम्तो गरेको खबर फैलियो, एकाएक व्यानर्जीको भाका बद्लियो। उनलाई यस्तो झट्का लाग्यो कि उनी हदप्रभ बनिन्। जहाँ आफ्नो किल्ला भत्किएको छ, त्यहीँ यसको विरुद्धमा धर्ना गर्नेसमेत घोषणा गरिन्।
मुख्यमन्त्रीको होस् त्यतिखेर उड्यो जतिखेर शपथ ग्रहणमा बोलाइएका 54 जना हिंसामा मरेका परिवारका सदस्यहरूमा 11 जना गोर्खाको नाम पनि देखिन्। जो 2017 को आन्दोलनमा ममता व्यानर्जीको पुलिसले गोली ठोकेर हत्या गरेका थिए, त्यसमा 11 सहिदका परिवारका सदस्यलाई पनि शपथ कार्यक्रममा बोलाइएको छ। राष्ट्रपति भवनको प्राङ्गणमा हुने शपथ उत्सवमा 6,500 जना पहुना बोलाइएको छ।7बजी प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद सदस्यहरूलाई पद र गोपनीयताको शपथ दिलाइनेछ।
शपथग्रहण समारोहमा बङ्गालका 54 सहिद परिवारका सदस्यलाई बोलाउनसाथ यता ममता व्यानर्जीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छन्। उता नरेन्द्र मोदीले शपथ ग्रहण गर्नेछन्, यता ममताले नैहाटीमा धर्ना दिनेछिन्। ममताको दाबी छ, मोदी झुटो कुरा फैलाइरहेका छन्। उनी हिंसामा 54 जनाको मृत्यु भएको कुरालाई मोदीले फैलाइरहेको झुट हो भन्दै प्रचार गरिरहेकी छन्।
वास्तवमा शपथ ग्रहण कार्यकक्रममा सहिद परिवारलाई निम्तो गरेर मोदीले सहिदको सपनालाई सम्बोधन गरिरहेका छन्, यो सम्बोधन ममताको मुटुमा तीर बनेर घुसेको छ। किन भने 54 मध्ये 11 जना गोर्खा सहिद छन्। जो बङ्गालका पुलिसले गोली हानेर मारेका हुन्।
ममता व्यानर्जीले यसलाई पनि मोदीले झुटो फैलाइरहेको आरोप लगाइरहेकी छन्। उल्टो ममताले भनेकी छन्, ‘भाजपाले फैलाएको हिंसाका कारण हाम्रा कार्यकर्ताहरूले घर छोडेर भाग्न परिरहेको छ। भाजपाले हिंसा फैलाइरहेको छ भन्ने देखाउन म धर्नामा बस्नेछु।’ यसै सम्बन्धमा भूमिगत नेता विमल गुरुङसित जान्न चाहँदा उनले भने, ‘ममता व्यानर्जीको कुरो साँचो हुनु हो भने हामीले घर छोडेर जानुपरेको कुरा पनि गरुन्।’
विमल गुरुङ अनुसार, ममता व्यानर्जीले गोर्खाल्याण्डको निम्ति लडिरहेका5हजार आन्दोलनकारीहरूलाई झुटो मुद्दा लगाएकी छन्। उनीहरू 2017 देखि घर छोडेर भाग्नु परिरहेका छन्। ‘ममता व्यानर्जीले पहाडमा मच्याएको हिंसाको प्रमाण शपथ ग्रहण कार्यक्रममा गएका ती 11 परिवारका सदस्यका अनुहार हो,’ विमल गुरुङले भने, ‘हिजैमात्र पनि हाम्रा प्रवक्ता, कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूलाई यसकारण मुद्दा लगाइएको छ किन भने उनीहरू बङ्गालबाट मुक्ति चाहान्छन्। छुट्टै राज्य चाहन्छन।’
झुटको राजनीति मोदीले नभएर ममता व्यानर्जीले गरिरहेको विमल गुरुङको अडान छ। ‘हाम्रा 11 जना सहिद परिवारलाई शपथ कार्यक्रममा बोलाएर राष्ट्रीयस्तरमा हाम्रो आन्दोलनलाई मोदीले मान्यता दिएका छन्,’ गुरुङले भने, ‘त्यसको विरोधमा धर्नामा बसेर ममता व्यानर्जीले फेरि पनि हाम्रा सहिदहरूको अपमान गरेका छन्। उनको यस्तो अपमान, अत्याचार र दमनबाट अब हामी शीघ्र मुक्त बन्नेछौं।’
अचम्म के छ भने जुन नैहाटीमा व्यानर्जी धर्नामा बस्नेछिन्, त्यहाँको नगरपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै भाजपामा सामेल बनेका छन्। 31 जना पार्षदहरूमा 29 जना भाजपामा सामेल भएर अविश्वास मतको प्रस्तावसमेत ग्रहण गरिएको छ।
यता दार्जीलिङमा पनि 17 जना पार्षदहरू विमल गुरुङ समूहमा आइसकेका छन्। उनीहरूले नगरपालिका पल्टाउने वित्तिकै बीपी बजगाईँ, तिलक रोकालगायत अन्यलाई पक्राउ शुरु गरिएको छ। विमल गुरुङले यसलाई पनि ममताको अत्याचार बताएका छन्।
उता जहाँ ममता धर्नामा बस्नेछिन् त्यहीँको व्यारेकपुर संसदीय क्षेत्रमा भाजपा कै अर्जुन सिंह सांसद निर्वाचित भएका छन्। क्षेत्रका चार नगरपालिका भाँटपाड़ा, नैहाटी, काँचरापाड़ा, हालीशहर भाजपाको अधिनमा गइसकेको छ।
यता मोदीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा 11 जना गोर्खा सहिद परिवारका सदस्यलाई निम्तो गर्दा पहाडमा हर्षोल्लासको माहौल बनेको छ। ‘हामी खुशी छौं बङ्गालको पुलिसले मारेका सहिद परिवारलाई यो निम्तो दिइएको छ। जुन सहिदहरू ममताको भाषिक साम्राज्यवादको विरोधमा उत्रँदा बङ्गाल पुलिसले हत्या गरेको हो,’ मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले भनेका छन्, ‘सबैलाई थाहा छ पहाडको लोकतन्त्रको हत्यारा ममता व्यानर्जी नै हुन्।’
रोशन गिरीले भनेअनुसार भाजपाको सरकार बन्ने वित्तिकै पहाडमा पुलिसले आन्दोलनकारीहरूको जुन हत्या गरेको छ, यसबारे एउटा जाँच समिति बसाइनेछ। जसको अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालयका एक न्यायाधीशले गर्नेछन्। बङ्गालले थोपेको झुटा मुद्दाहरूबारे समितिले काम गर्नेछ।
‘दार्जीलिङका गोर्खाहरूलाई यस्तो ठूलो समारोहमा निम्तो गर्नु गोर्खाल्याण्डप्रतिको हाम्रो बलिदानलाई स्वोकारोक्ति दिनु हो,’ गिरीले भने। विविध कारणले5परिवारका सदस्यले मात्र समारोहमा अंशग्रहण गर्नेछन्। तर उनीहरूले 11 जनालाई नै प्रतिनिधित्व गर्नेछन्।
‘यसको लागि म प्रधानमन्त्री अनिभाजपा प्रति आभार प्रकट गर्छु,’ गिरीले भनेका छन्। आज प्रधामन्त्रीको शपथ कार्यक्रममा अंशग्रह गर्नेहरूमा 1. बिमल शाशङ्कर – गोक, 2. महेश गुरुङ – रैलिङ, 3. सुनील राई – कैजले, 4. टाँशी भोटिया – सोनादा, 5. सूरज भुसाल (सुन्दास) – तुङ्सुङ, 6. समीर गुरुङ – सिंहमारी, 7. अशोक तामाङ – लुईस् जुब्ली, 8. आशीष तामाङ – मिरिक, 9. दावा टाँसी भोटिया, कालेबुङ-पेदोङ, 10. रोमिला राई – दार्जीलिङ अनि 11. बरुणभुजेल – कालेबुङ रहेका छन्।
बीपी बजगाईँहरूको पक्राउ विनयहरूको ‘फ्रस्टेशन वार’ : यस्तै अन्याय-अत्याचार भइरहे जेल भरौं कार्यक्रम गर्न सबै तयार बसौं- विमल गुरुङ
भावुक बनाउने ट्रेलर : सम्बन्धको उतार चढाउको कथा भन्ने ‘आप्पा’